15 Jehova wee sị m: “Ọ bụrụgodị na Mozis+ na Samuel+ eguzoro n’ihu m, mkpụrụ obi m agaghị adị n’ebe ndị a nọ.+ A ga-achụpụ ha n’ihu m, ka ha pụọ.+ 2 Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ha ajụọ gị, sị, ‘Olee ebe anyị ga-aga?’ ị ga-asị ha, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Onye ọ bụla ajọ ọrịa ga-egbu, ajọ ọrịa ga-egbu ya! Onye ọ bụla mma agha ga-egbu, mma agha ga-egbu ya! Onye ọ bụla ụnwụ ga-egbu, ụnwụ ga-egbu ya!+ Onye ọ bụla a ga-adọrọ n’agha, a ga-adọrọ ya n’agha!”’+ 3 “‘M ga-enyefekwa ha n’aka ụzọ ihe anọ,’+ ka Jehova kwuru, ‘ka mma agha gbuo ha, ka nkịta dọkpụrụ ha, ka anụ ufe nke eluigwe+ na anụ ọhịa nke ụwa rie ha ma laa ha n’iyi. 4 M ga-eme ka ha ghọọrọ alaeze niile nke ụwa ihe na-akpata ịma jijiji+ n’ihi Manase nwa Hezekaya, bụ́ eze Juda, n’ihi ihe o mere na Jeruselem.+ 5 N’ihi na ònye ga-enwe ọmịiko n’ebe ị nọ, gị Jeruselem, ònye ga-emere gị ebere,+ ònyekwa ga-abata jụọ gị otú i mere?’ 6 “‘Gị onwe gị ahapụwo m,’+ ka Jehova kwuru. ‘Ị na-ala azụ azụ.+ M ga-esetị aka m mee gị ihe wee laa gị n’iyi.+ Ike ịgbanwe obi m agwụwo m.+ 7 M ga-eji fọk e ji afụcha ọka* fụchaa ha+ n’ọnụ ụzọ ámá ala a. M ga-agbawa ha aka ụmụ.+ M ga-ebibi ndị m, ebe ọ bụ na ha ahapụghị ụzọ ha.+ 8 Ndị inyom ha di ha nwụrụ adịwo ọtụtụ n’ihu m karịa ájá dị n’oké osimiri. M ga-eme ka onye na-ebukọrọ ihe mmadụ wakpo ha n’etiti ehihie, wakpo ma nne ma nwa okorobịa.+ M ga-eme ka oké iwe na nsogbu dakwasị ha na mberede.+ 9 Ike agwụwo nwaanyị mụrụ ụmụ asaa; ọ na-esiri mkpụrụ obi ya ike ikute ume.+ Anyanwụ ya adawo n’ehihie;+ ihere emewo ya, e mechuwokwa ya ihu.’ ‘M ga-enyefe ndị fọdụrụ n’ime ha n’aka mma agha n’ihu ndị iro ha,’+ ka Jehova kwuru.” 10 Nne m, efuola m,+ n’ihi na ị mụwo m, bụ́ nwoke ya na ụwa dum na-ese okwu, na-alụkwa ọgụ.+ Ọ dịghị onye m gbazinyere ihe, ọ dịghịkwa onye gbazinyere m. Ha niile na-edu m ikwu.+ 11 Jehova kwuru, sị: “N’ezie, m ga-emere gị ihe ọma.+ N’ezie, m ga-agbachitere gị n’oge ọdachi+ nakwa n’oge ahụhụ ka onye iro ghara ime gị ihe ọ bụla.+ 12 Mmadụ ọ̀ pụrụ ịkụrisị ígwè, bụ́ ígwè nke si n’ebe ugwu, kụrisịakwa ọla kọpa? 13 M ga-eme ka e bukọrọ ihe onwunwe gị na akụ̀ gị dị oké ọnụ ahịa+ n’akwụghị gị ụgwọ, n’ihi mmehie gị niile, n’ókèala gị niile.+ 14 M ga-emekwa ka ndị iro gị buru ha banye n’ala ị na-amaghị.+ N’ihi na iwe m enwuruwo ọkụ.+ Ọ bụ unu ka ọ ga-ere.” 15 Gị onwe gị maara.+ Jehova, biko, cheta m+ ma chee ihu n’ebe m nọ ma bọọrọ m ọbọ n’ahụ́ ndị na-akpagbu m.+ Ewepụla ndụ m n’ihi eweghị iwe ọsọ ọsọ gị.+ Mara na mụ onwe m eburuwo nkọcha n’ihi gị.+ 16 Okwu gị ruru m aka, m wee rie ya;+ okwu gị wee bụrụ ihe na-enye m ọṅụ+ na ihe na-eme ka obi tọọ m ụtọ;+ n’ihi na a kpọkwasịwo m aha gị,+ Jehova Chineke nke ụsụụ ndị agha.+ 17 Adịghị m anọ n’etiti ndị na-eme ihe ọchị+ ma soro ha na-aṅụrị ọṅụ.+ M na-anọ naanị m n’ihi aka gị,+ n’ihi na i mewo ka oké iwe ju m obi.+ 18 Gịnị mere ihe mgbu m adịghị akwụsị akwụsị,+ ọnyá m abụrụkwa nke na-enweghị ngwọta?+ O kweghị ala ala. I wee dịrị m nnọọ ka ihe aghụghọ,+ dị ka iyi a na-apụghị ịtụkwasị obi.+ 19 Ya mere, nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọ bụrụ na ị ga-alọghachi, m ga-akpọrọghachi gị.+ Ị ga na-eguzo n’ihu m.+ Ọ bụrụkwa na i mee ka ihe dị oké ọnụ ahịa si n’ihe na-abaghị uru pụta, ị ga-abụ ọnụ na-ekwuru m. Ha onwe ha ga-alaghachikwute gị, ma ị gaghị alaghachikwuru ha. 20 “Emewo m ka ị ghọọrọ ndị a mgbidi ọla kọpa e wusiri ike;+ ha ga-alụso gị ọgụ, ma ha agaghị emeri gị.+ N’ihi na m nọnyeere gị, ịzọpụta gị na ịnapụta gị,”+ ka Jehova kwuru. 21 “M ga-anapụta gị n’aka ndị ọjọọ,+ m ga-anapụtakwa gị n’ọbụ aka ndị aka ike.”